Tabaruciddu iyo internship shaqooyin | Ayuub iyo shaqo khayraadka ka USAHello | USAHello
Tabaruciddu iyo internship shaqooyin
Tabaruciddu iyo internship shaqooyin waa shuqulkii aan la bixin kaa caawinaya in aad heshid waayo-aragnimo goobta shaqada. Waxay caan ku yihiin USA. Baro sababta shaqo iskaa wax u qabso iyo internship noqon kartaa tallaabooyinka mustaqbalkiisa muhiim ah iyo sida loo helo shaqo, kuwaas oo.
Waxaad ka heli laga yaabaa in ay la yaab leh in dad badan oo u shaqeeya oo lacag la'aan ah ee USA. Laakiin layliyo iyo iskaa wax kaa caawin kara inaad la kulanto dad iyo xirfadaha faa'iido. Waxay inta badan u horseedi shaqo mushaari ah.
Bal maxaan u ahaanayaa layli ah ama iskaa wax u qabso?
Shaqooyinka Volunteer iyo internship noqon kartaa guuro muhiim mustaqbalkiisa. Waxaa laga yaabaa in aadan bixin, laakiinse waxay idinku siin doonaa waayo-aragnimo qiimo leh iyo laga yaabaa in ugu danbeyn keeni shaqo mushahar.
Shaqooyinka Volunteer iyo internship ku siin waayo-aragnimo ah ee goobaha shaqada ee USA
Waxaad ku baran doontaa dadka American iyo goobaha shaqada. Waxaad arki doontaa sida ay dadka dalka Maraykanka falo oo dhaqmaan shaqada. Waxaad noqon kartaa mid saaxiibtinimo, odhan hello, iyo su'aalo weydiin, iyo dadka shirkadda ha farxeen iyaga waxaad ka caawin doontaa. Waxay rabaan in ay ku caawiyaan. Tusaale ahaan, waxay ku siin karaan tixraaca shaqo marka aad codsato shaqo mushaari ah.
Shaqooyinka Volunteer iyo internship caawin doonaa helitaanka shaqo mushaari ah
waxaa laga yaabaa in aadan awoodin in ay ka shaqeeyaan muddo dheer, oo haatan laga yaabaa in aad isku dayayaan si aad u hesho shaqo mushaari ah. Tabaruciddu iyo internship shaqooyin tusi shaqeeyayaasha aad tahay shaqo adag. Waxaa sheegayaa loo shaqeeyayaasha in aad horumarinta xirfadaha cusub oo ah in aad adigu halis ah oo ku saabsan helitaanka shaqo.
Shaqooyinka Volunteer iyo internship idin bari doonaa xirfado cusub
Waxaad baran doontaa xirfadaha shaqo waxtar leh, sida sida ay u shaqeeyaan koox iyo sida loo hadlo dad. Weydii maamulaha haddii aad rabto in ay ku dhaqmaan xirfad gaar ah ama caawin mashruuc gaar ah. Tababaraha Your dhihi kara ma jiro. Si kastaba ha ahaatee, waxaa inoo wanaagsan si ay u muujiyaan aad xiisaynayso. Oo waxay ogaan doonaan in aad ku faraxsan tahay in ay caawiyaan yihiin oo laga yaabo in aad weydiiso in mustaqbalka.
Waxaad kalsooni ka iskaa wax u qabso ama layli heli doontaa
Waxay noqon kartaa cabsi leh in ay shaqo bilowdo wadan cusub la dhaqan kala duwan. Tabaruciddu iyo internship shaqo ku siin fursad ay ku dhaqmaan iyo qaladaad samayso inta aad baran. Haddii aad khalad samayso, dadka intooda badan ma noqon doonto kacsan. Iyagu way og waxaad weli barashada yihiin iyo aad bixin is.
Waa maxay shaqooyinka internship sida?
Shaqooyinka Layli waa sida tababarka. Qofka ma internship ah waxaa loo yaqaan layli ah. interns intooda badan waa ardayda ama dadka dhallinyarada ah, laakiin qaar ka mid ah ay yihiin dadka waaweyn. Interns qaataan dhowr bilood ka baranayaan xirfado. shaqo uu ku dhamaan doono taariikhda go'an. Waxaa ku wareysan doona shaqada sida shaqo mushaari ah, oo laga yaabaa in aad saxiixdo heshiis. interns Qaar ka mid ah u hesho xoogaa lacag ah laakiin marnaba mushaar buuxa.
internship kastaa waxa uu leeyahay xaddi kala duwan oo masuuliyad. Arag ah Sharaxaad shaqo internship in ay muujinaysaa sida ay layli ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah kooxda.
Tusaalooyinka layliyo yihiin:
In shirkadaha iibka: hadalka macaamiisha iyo barashada marketing
In shirkadaha IT: xogta iyo barashada ku saabsan barnaamijyada cusub computer
In goobaha qurxinta dumarka: dhaqo timaha iyo nadiifinta iyo barashada Attam
Sida loo helo shaqooyin internship
Shaqooyinka websites sida Internships.com, Idealist.org, iyo Experience.com, leeyihiin layliyo badan oo uu ka soo xusho.
Waa maxay shaqooyinka iskaa wax u eg?
iskaa wax u qabso A siinayaa isaga ama iyada wakhti iyo xirfadaha for free. Waxaa jira xeerar caadi ahaan ka yar tabaruceyaasha. Tusaale ahaan, mutadawiciin badanaa go'aan ka gaari doona inta saacadood in ay ka shaqeeyaan asbuuc kasta. Tabarucidda shaqo maaha kuwo sida caadiga ah muddo go'an, laakiin waxaad go'aansan kartaa marka aad rabto in aad joojiso. Eeg a iskaa wax u qabso sharaxaada shaqada in waxaa loogu talagalay dadka si ay u caawiyaan nadiif ah oo ay u ilaaliyaan beerta a.
Tusaalooyinka iskaa wax u qabso waa:
maktabadaha: caawiyo buugaagta sort, diyaarineysa dhacdooyinka, caawinta carruurta iyo dadka kale ee
In hoy xoolaha: quudinta iyo xoolaha jimicsiga, nadiifinta, shaqada xafiiska
In seerayaasha qaranka: nadiifinta qashinka, barayay martida ku saabsan park
Sida loo helo shaqooyin iskaa wax u qabso
Waa sahlan tahay si ay u noqdaan tabaruce. meelo badan oo bulshada u baahan tahay caawimaad aad. Haddii ay jirto meel aad rabto in aad iskaa, iyaga wac oo weydii. Xitaa haddii ay aan iskaa wax u qabso hor, waxay u dhawdahay inay xiiseyneyso.
websites Good for helo fursado iskaa wax u qabso waa Volunteermatch.org, Pointsoflight.org, iyo Idealist.org.
Welcome Qaxootiga in Your Community
Sida xubin bulshada ka mid ah ayaa kaa caawin kara qaxootiga soo dhaweynayaa in aad bulshada.